PressReader - Kwayedza: 2018-10-05 - – ZVIWANIKWA ZVEZIMBABWE –
Kwayedza - 2018-10-05 - Nhau Dzemuno - Juliet Sharon Tom
Shona: GUDO / BVENI / DIRO Ndebele: Indwangu English: Baboon
KANA muri muZimbabwe, gudo, bveni kana kuti diro rinozivikanwa nekuba zvirimwa zvevanhu muminda nemudzimba. Mhuka iyi ine mukurumbira kunzvimbo dziri kumiganho yenyika sekuVictoria Falls, kuChirundu nekuKariba uko anosweroita besanwa nevanhu.
Makudo imhuka dzesango idzo dzinora- rama nekudya michero nemiti yakasiyana, midzi nezvimwe zvinodyiwawo nevanhu. Kunyanya mumisha yemumaguta nekumaruwa, mapfeni anodya zviripo – sezviya zvinoraswa nevanhu kumarara nemumabhini, nemichero yepamusha.
Gudo rine makumbo marefu. Kana rimire, makumbo emberi akareba kudarika eshure.
Musoro wegudo une mahobi nebuno rakareba kunge musoro wembwa.
Gudo – kunyanya gono – rine mazino epamberi marefu ayo anototyisa kana rikanyinura.
Makudo ane ruvara rwakaita kakupfumburuka asi kachiwandira muhutema, marume aine mvere refu kupinda makadzi nechekumusoro kwawo. Ose marume nemakadzi haana mvere kumagadziko kwawo uko kune ganda rakaomarara nemuswe murefu unogara wakagonya.
Makugo anogara ari chikwata (troop) chinotungamirirwa nehoromba (rume) guru pane ose, mamwe achitevera. Horomba ndiro rinoronga mafambiro, kazhinji richiteverwa nemakadzi nevana. Mwana wegudo anonzi rushiye.
Mapfeni kana kuti matiro anotaurirana nezviso, karuzha kana nekubatana. Ane karuzha ako kaanonyanyoita masikati.
Kunze kwekudya michero nemiti, diro rinokwanisawo kuvhima richidya mhuka diki dzakaita semhara, tsuro, mbeva nemadzvinyu. Rinozivikanwazve nekubata huku, mbudzi kana hwai mumisha. Asi chimwe chinofarirwa negudo chinyavada kana kuti rize.
Mimba yegudo inota mazuva 180 apo panobarwa rushiye. Mumasvondo ekutanga, rushiye rwunenge rwuine chiso chakada kutsvukirira (pink) uye kamwana aka kanogara kakabatirira padumbu raamai vako, kozopota kave kuberekwa pamusana nekukura.
Makudo anozivikanwa nekusaremekedza vanhu – kunyanya vakadzi nepwere. Kune kwakawanda kwaanobvutira vanhu mapasuru achinobvujunura kutsvaga chikafu.
Pasi pemutemo weParks and Wildlife Act, makudo imhuka dzinotambudza. Izvi zvinoreva kuti kana akangozivikanwa kuti ave kushungurudza vanhu, panofanirwa kutorwa matanho. Naizvozvo, kana mukaona makudo akunetsai, zivisai veParks kana mapurisa vari pedyo nemi.
Veruzhinji munoyambirwawo kuti musape mhuka idzi chikafu chinodyiwa nevanhu asi kuti musiye dzichizvitsvagira mudondo.
Zvimwe zviri muchinyorwa chino: Field Guide to the Larger Mammals of Africa - Chris and Tilde Stuart
The Safari Companion - A Guide to Watching African Mammals - Richard Estes
The Complete Guide of Southern African Mammals - Gus Mills and Lex Hes